Thwebula Outlook 1.3.17 isizulu – Vessoft
Outlook – kuyithuluzi for the management imeyili. Isofthiwe bahlunga ngokuzenzakalelayo Okungena, siphakamise imiyalezo ebalulekile kakhulu futhi ebeka abanhliziyo ezingabalulekile kakhulu nezinye iingaba. Outlook kwenza ama-akhawunti amaningi kanyekanye futhi unamathisele amafayela kuma imeyili OneDrive, eyinqolobane kanye nezinye izinsizakalo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukususa ngokushesha, archive, noma uthumele umlayezo ku-schedule. Outlook Ubuye ikhalenda esakhelwe futhi ikuvumela ukulungisa isaziso izenzakalo ezibalulekile.
Incwadi Automatic ukuhlunga
Ukweseka akhawunti amaningi
Ikhono unamathisele amafayela imeyili
Amazwana on Outlook:
Outlook Ahlobene software: